एआइजीको दरबन्दी थपियो : यी हुन् मुख्य दाबेदार ! - Kantipath.com
एआइजीको दरबन्दी थपियो : यी हुन् मुख्य दाबेदार !
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजीको) सरुवा गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) मा धीरज प्रताप सिंहको सरुवा भएको छ। यसअघि सिंह २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा थिए। डिआईजी अरुण बिसीको एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएको छ। दुई नम्बर प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा रमेश रन्जितकार, बागमति प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रकाशजंग कार्कीलाई पठाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा दिवेश लोहनी, लुम्बिनी प्रदेशमा मुकुन्द आचार्य, कर्णाली प्रदेशमा गणेश ऐर र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा पुरुषोत्तम कँडेललाई पठाइएको छ। त्यस्तै विशेष ब्यूरोमा घनश्याम अर्यालको सरुवा भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) का डिआईजी सहकुल थापाको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय निर्देशनालयमा सरुवा भएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी पनि थप भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा एक एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागलाई छुट्याएर कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
हाल नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ एआइजीको तीनवटा मात्र दरबन्दी छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग र नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एआइजीको दरबन्दी छ । अब नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ एआइजीको दरबन्दी चारवटा हुनेछ । हालका डिआइजीमध्ये सहकुल थापा पहिलो नम्बरमा भएकाले उनकै बढुवा हुने स्रोत बताउँछ । जसकारण उनलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समेत पठाइएको छैन । थापाको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय निर्देशनालयमा सरुवा भएको छ ।
हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले नौ महिनापछि अवकाश पाउनेछन् । त्यो अवस्थामा विश्वराज पोखरेल महानिरीक्षकका एक्ला दाबेदार रहेका भए पनि दरबन्दी थप भएपछि महानिरीक्षक पदमा अब दुईजनाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विश्वराज पोखरेल पनि दरबन्दी थप गरेर एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
Previous Previous post: कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउने
Next Next post: मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै : सर्वोच्चले अंकुश लगाए ओली एक्लै हुने !